Iago Aspas oo sheegay in Barcelona ay qalad weyn ku sameesay iibinta Luis Suarez
Home Horyaalka Spain Iago Aspas oo sheegay in Barcelona ay qalad weyn ku sameesay iibinta...
Weeraryahanka Celta Vigo Iago Aspas ayaa aaminsan in Barcelona ay ku dhacday qalad weyn iibintii Luis Suarez xagaagii lasoo dhaafay.
Aspas, oo Suarez kula soo ciyaaray Liverpool intii u dhaxeysay 2013-14, ayaa sidoo kale ku amaanay Atletico Madrid inay si dhaqso leh u dhaqaaqeen isla markaana ay heleen weeraryahan tayo leh.
Suarez ayaa la fasaxay xagaagii ka dib markii Ronald Koeman loo magacaabay Camp Nou. Kadib markii loo sheegay inuusan mustaqbal ku laheyn Barcelona, ​​Suarez wuxuu doortay inuu sii joogo Spain, kuna biiro Atletico Madrid .
Go’aankaas ayaa noqday mid faa’iido leh madaama Suarez uu yahay gooldhaliyaha ugu sareeya La Liga xilligan, isagoo dhaliyay 14 gool ilaa iyo haatan xilli ciyaareedkan. Goolashiisa ayaa ku riixay Atletico Madrid inay sidoo kale hogaamiso horyaalka sidoo kale.
Wareysi uu siiyay Marca , Iago Aspas wuxuu ugu yeeray Suarez inuu yahay guuleyste dhab ah madaama uu dib u xasuustay waqtigiisii ​​uu la ciyaarayay reer Uruguay Liverpool.
“Runtu waxay tahay inuu ahaa weeraryahan dhab ah, guuleyste xitaa kulamadii tababarka. Wuxuu had iyo jeer siin jiray 200 boqolkiiba,” Iago Aspas ayaa yiri.
Previous articleJuventus oo si ba’an u raadineysa qadka dhexe ee kooxda Roma Nicolo Zaniolo.
Next articleReal Madrid oo sharuud adag ku xirtay u dhaqaaqista Kylian Mbappe ee Kooxda PSG